Daawo Sawiradii Ugu Horeeyay Ee Laga Qaaday Saxiixa Cusub Ee Liverpool Virgil van Dijk Oo Noqday Daafaca Ugu Qaalisan Dunida by Saed Balale
Sunday July, 15 2018 - 22:07:31
Monday January 01, 2018 - 14:40:47 in by Burco Office
Liverpool ayaa goordhaweyd dhamesytirtay saxiixa daafaca reer Netherlands Virgil van Dijk kaasoo uga soo biiray kooxda Southampton iyagoo ku soo iibsaday adduun lacageed oo gaaraya 75 milyan ginni, taasoo ka dhigeysa daaficii ugu qaalisanaa kubada cagta caalamka.
Kooxaha Liverpool iyo Southampton ayaa ka heshiiyay saxiixa ciyaaryahanka 27kii bishii December laakiin waxaa si rasmi ah loo dhameystiray maanta madaama uu maanta furmay suuqa kala iibsiga bisha Janaayo.
Daaficii hore ee Southampton ayaa kooxda Liverpool waxa uu u xiran doonaa maaliyada No. 4 isagoo la filayo inuu sida ugu dhaqsiyaha badan qeyb uga noqdo shaxda kooxda gaar ahaa kulanka Merseyside Derby ee ay la ciyaarayaan Everton ee FA Cup.
Ka dib markii uu saxiixay heshiiska maanta waxa uu shabakada kooxdiisa u sheegay inuu ku haminayo inuu koobab ku guuleysto isagoo xusay in tayada kooxda iyo horumarka ay sameysay inay ka dhigeyso kuwa ku dhow inay hantaan koobab.
Virgil van Dijk ayaa daawanayay kooxdiisa cusub ee Liverpool kulankii Anfield ee ay Reds 2-1 uga badisay Leicester City Sabtidii isagoo daawaday Mohamed Salah oo labo gool oo cajiib ah dhaliyay qeybtii labaad ee ciyaartaas.
Hadaba halkaan ka daawo sawiradii ugu horeysay ee laga qaaday Virgil van Dijk isagoo xiran maaliyada casaanka ah ee Liverpool: